ကိုယ့်ကိုကိုယ် အသက်ကြီးလာတာ မေ့နေတယ်ဆိုတဲ့ စိုင်းစိုင်း
ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် စိုင်းစိုင်းက သူ့မှာရှိနေတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုကို ပြောပြလို့လာပါတယ်။ အဲ့ဒါက သူ့ကိုယ်သူ အသက်ကြီးလာတာတာ မေ့နေတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပါပဲ
ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် စိုင်းစိုင်းက သူ့မှာရှိနေတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုကို ပြောပြလို့လာပါတယ်။ အဲ့ဒီပြဿနာအကြောင်းကို သူ့ရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့်ကနေ ပရိသတ်တွေသိအောင် ယခုလို ပြောထားတာပါ။
“ကျွန်တော့်ရဲ့အဓိက ပြဿနာက ကိုယ့်ကိုကိုယ် အသက်ကြီးလာတာကိုမေ့နေသလို ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေ ကြီးလာတာကိုပါ မေ့နေတာပါပဲ” ဆိုပြီး ဒီဇင်ဘာ(၁၇) ရက်နေ့က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ရေးထားတာပါ။
စိုင်းစိုင်းရေးထားတဲ့ စာလေးကို ဖတ်ပြီး ပရိသတ်တွေလည်း သဘောကျလို့နေပါတယ်။ စိုင်းစိုင်းဟာ လက်ရှိမှာ ပွဲတွေ တက်ဖြစ်နေသလို Media7နဲ့အတူ ပထမဆုံးတွဲပြီး ဇာတ်ကားရိုက်ကူးဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီဇာတ်ကားမှာ မင်းသမီး (၁၂) ယောက်နဲ့ ရိုက်ကူးဖို့ စီစဉ်နေတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို Media7က ထုတ်လုပ်သူ ကိုဝေမင်းမောင်ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ယခုလို ရေးသားထားပါတယ်။
“ဪ ..... စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် နှင့် Myanmar Media7ပေါင်းပြီး ဇာတ်လမ်းတခါမှ မရိုက်ဖြစ်ဘူး .... အခုရိုက်ဖို့စီစဉ်တော့လည်း မင်းသမီးက ၁၂ ယောက်ကြီးများတောင် ??? ကိုစိုင်း နဲ့ ရွှေမန်း နှစ်ယောက်ပေါင်းဇာတ်တောင်းပြီဆို အဲလိုဇာတ်ပေးမယ်လို့များ ကြံထားရလေသရော့လားဗျာ ????မိုးနီ လွင် / Thar Nyi ........ ဒီလူအဖွဲ့နဲ့တော့ ကောင်းမယ်လို့တော့ ယုံတယ် .... မြန်မြန်တော့ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ကောင်းပါရဲ့” ဆိုပြီး ဒီဇင်ဘာ(၁၄) ရက်နေ့က ရေးသားခဲ့တာပါ။ပရိသတ်တွေကလည်း အဲ့ဒီဇာတ်ကားက ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာ တွေးပြီး ရင်ခုန်နေကြပါတယ်။
သရုပ်ဆောင်ပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ၂၀၀၇ခုနှစ်မှာ မင်္ဂလာပါဇာတ်ကား၊ ၂၀၀၇ခုနှစ်မှာ ဂုဏ်ရှိန်ပြင်းတဲ့ ချစ်ခြင်းသိက္ခာ၊ ၂၀၀၈ခုနှစ်မှာ ရင်ခွင်နှင်းဆီ ၊ ၂၀၁၁ခုနှစ်မှာ အာဒံရယ် ဧဝရယ် ဒဿရယ်၊ ၂၀၁၆ခုနှစ်မှာ အေဒင်ရဲ့ နတ်သမီး၊ From Bangkok To Mandalay၊ ဂျုန်းဂျုန်းဂျက်ဂျက် စတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာ ပါဝင်ထားပါတယ်။
စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ဟာ စီးပွားရေးအနေနဲ့ Frezon Production မှာလည်း ဦးဆောင်သူတစ်ဦးဖြစ်သလို SAI Cosmetix ရဲ့ ထုတ်လုပ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။